မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ဂျပန်ဆက်လက်ကူညီမည် ၊ ရန်ကုန်မြို့့ဖွံ့ဖြို? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ဂျပန်ဆက်လက်ကူညီမည် ၊ ရန်ကုန်မြို့့ဖွံ့ဖြို?
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအ သွင်ကူးပြောင်းမှုကို ဂျပန်က ဆက် လက်ကူညီမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း ထောက်ပံ့သွားမည်ဟု သမ္မတဦးထင် ကျော်နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ဂျပန်ဝန်ကြီး ချုပ် အာဘေးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတဦးထင်ကျော်နှင့် ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးတို့ ဒီ ဇင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် တိုကျိုမြို့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်သည် မြန်မာ နိုင်ငံရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်းများအတွက် အထောက် အပံ့အသစ်များကိုလည်း ကြေညာ ဖွယ်ရှိသည် ဟုပသိသ သတင်း က ဆိုသည်။
ဂျပန်ကထောက်ပံ့ရန် စီစဉ် ထားသည့် စီမံကိန်းများသည် ရန် ကုန်မြို့၏ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတို့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွည်သည် ဟု ဂျပန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ က ပြောသည်။ နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်း ဆောင်နှစ်ဦး တွေ့ဆုံရာတွင် မြန် မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူး ပြောင်းမှုကို ဂျပန်နိုင်ငံက ဆက်လက် ကူညီထောက်ပံ့မည့်အကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် အာဘေးက ထပ်မံ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်ဟုလည်ုးပသိသ သတင်းက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျပန်ဘာသာ စကား ပညာရေးတိုးတက်ရေး၊ ဂျပန်ကုမ္ပဏီများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု တိုးပွားလာရေး စသဖြင့် နှစ်နိုင် ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက်စေရေးအ တွက် နည်းလမ်းအသစ်များကို လည်း ဝန်ကြီးချုပ်အာဘေးက ချ ပြဖွယ်ရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိ ပက္ခအခြေအနေ တိုးတက်ရေးအ တွက်လည်း ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး အမြင်ချင်း ဖလှယ်ကြကြောင်ုးပသိသ သတင်းက ဆိုသည်။
သမ္မတဦးထင်ကျော်သည် ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေးမည့် နိုင်ငံတကာညီလာ ခံတက်ရောက်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။